पाकिस्तान र वेस्ट इन्डिजको अग्निपरीक्षा! | Hamro Khelkud
पाकिस्तान र वेस्ट इन्डिजको अग्निपरीक्षा!
एजेन्सी – इंग्ल्यान्ड र वेल्समा जारी एक दिवसिय विश्वकप क्रिकेटमा आज पाकिस्तान र वेस्ट इन्डिजबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ । खेल नेपाली समयअनुसार ३:१५ देखि सुरु हुने छ ।
वेस्ट इन्डिजले विश्वकपको सुरुवाती दुई संस्करण (सन् १९७५,१९७९) को उपाधि जितेको थियो । पाकिस्तानले सन् १९९२ मा इमरान खानको कप्तानीमा इंग्ल्यान्डलाई २२ रनले हराउँदै विश्वकप जितेको थियो । समग्रमा हेड टु हेडमा पाकिस्तान भन्दा वेस्ट इन्डिज धेरै अघि छ । हालसम्म यी दुई देशबीच १ सय ३३ वान डे खेल हुँदा ७० खेलमा वेस्ट इन्डिज र ३० खेलमा पाकिस्तान विजयी भएको छ । ३ खेल बराबरीमा सकिएको छ । लिग तालिकाको शीर्ष चारमा रहेर सेमिफाईनल खेल्ने दाउँमा रहेका दुवै टोलीलाई एक अर्काबीच अग्निपरिक्षा हुने छ ।
दुवै टोली सुखद सुरुवात गर्न चाहान्छन् । पछिल्लो समय खराव प्रर्दशनबाट गुज्रि रहको पाकिस्तान सबै प्रर्दशनलाई बिर्साउँदै विश्वकपमा उत्कृष्ट सुरुवात गर्न चाहन्छ । पाकिस्तान पछिल्ला १० खेलमा लगातार पराजित भएको छ । अष्ट्रेलियासँग ५–० र इंग्ल्यान्डसँग ४–० ले ओडीआई सिरिज गुमाएको पाकिस्तानले वार्मअप खेलमा अफगानिस्तानसँग पनि पराजित हुनपुग्यो ।
यता वार्मअप खेलमा न्युजिल्यान्डलाई ९१ रनले पराजित गरेको वेस्ट इन्डिजको मनोबल उच्च छ । जुन खेलमा वेस्ट इन्डिजले ४ सय २१ रनको विशाल योगफल बनाएको थियो । वेस्ट इन्डिज वार्मअप खेलको नतिजालाई निरन्तरता दिन चाहान्छ ।
वेस्ट इन्डिजका युवा खेलाडी विकेटकीपर शाई होप उत्कृष्ट लयमा छन् । होपलाई रोक्न पाकिस्तानका बलरलाई कठिन हुने देखिन्छ । उनले पछिल्ला ११ खेलमा ४ शतक र ३ अर्ध शतक प्रहार गरेका छन् । वार्मअप खेलमा न्युजिल्यान्डविरुद्ध पनि शतक प्रहार गरेका थिए ।
विस्फोटक ब्याटिङ गर्न माहिर आन्द्रे रसेलको प्रर्दशन पनि वेस्ट इन्डिजको लागि निकै महत्वपूर्ण हुने छ । आईपीएलमा थुप्रै असम्भव बनेको जित सहज जिताएका रसेलले वार्मखेलमा पनि उत्कृष्ट ब्याटिङ गर्दै आफ्नो लयलाई निरन्तरता दिए । त्यस्तै अन्तिम वान डे विश्वकप खेलि रहेका क्रिस गेल पनि राम्रो लयमा छन् ।
गेल, रसेल, होप, शिमरोन हिटमायर, निकोलस पुरन, जोसन होल्डर, इविन लुईस जस्ता आक्रामक ब्याट्सम्यान रहेको वेस्ट इन्डिजले पाकिस्तानविरुद्ध रनको पहाड बनाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ । थोमस ओशन, एशले नर्श, फविन एलिन, केमार रोच, शेल्डन कोटरेल उसका बलिङ हतियार हुन् । सम्रगमा वेस्ट इन्डिजको बलियो हतियार विश्फोटक ब्याटिङ र अलराउण्डर खेलाडीको लय हो ।
पाकिस्तानका लागि ओपनर फकार जमान र इमाम उल हकको प्रर्दशन महत्वपूर्ण हुने छ । त्यस्तै उत्कृष्ट लयमा रहेका बाबर आजम राम्रो साथको खोजिमा छन् । अनुभवी मोहम्मद हफिज, ह्यारिस सोहेल, सोएव मालिक, कप्तान सरर्फराज मध्य क्रमका भरपर्दा ब्याट्सम्यान हुन् । फिनिसर भने पाकिस्तानको केहि कमजोर देखिन्छ ।
हसन अली, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज, मोहम्मद हुसेन, शाहिन साह अफ्रिदी तीव्र गतिका बलिङ हतियार हुन् । सादव खान र इमान वासिम स्पिनर तथा तल्लोक्रममा ब्याटिङ गर्न सक्ने क्षमता राख्दछन् ।
पाकिस्तानको पूर्ण टोली :